Ungakhohlwa discuss Kobe University
Kobe University, ukusebenza ngomoya ubuqotho, inkululeko, kanye nokubambisana ngokuvumelana nesiko elalivuliwe futhi exubile kanye nendawo, ihlose neqhaza emphakathini womhlaba ngokwakha ulwazi esisekelweni amagugu universal kanye nekuphocelela yokuqonda ocebile futhi ikhono nobuholi.
Kobe University, kuqashelwa mission zako kanye umthwalo wokweseka abantu Japan njengoba eyunivesithi kazwelonke, kanye social yalo, izindima zomlando kanye zesifunda njengoba isikhungo yemfundo ephakeme, ngalokhu uwenza Mqulu Kobe University Education.
1. Sikhungo Philosophy
Ukuze neqhaza ekuthuthukiseni yokufunda, injabulo besintu, ekulondolozweni imvelo global futhi ukuthula emhlabeni, Kobe University usungula njengoba nefilosofi yayo eliyisisekelo wokufundisa ukuhlinzekwa lokuhlangana imfundo ephakeme kakhulu kulolu namazinga omhlaba ngesikhathi undergraduate yezifundiswa zombili amazinga.
2. Sikhungo Isimiso
Ukuze asize abafundi nokufinyelela zabo ngabanye, babe ngamalungu awusizo emphakathini, futhi ukuthuthukisa amakhono abo ngokugcwele, Kobe University uwenza njengoba isimiso zalo eziyisisekelo wokufundisa nokuhlinzekwa kwemfundo lapho ugcizelela ubuntu kanye ukwehluka njengoba ehlonipha ukuzimela kanye ukuzimela umfundi ngamunye.
3. Amagoli Sikhungo
Esekelwe Philosophy ngenhla futhi Isimiso, Kobe University, ngalokugcwele yini ematfuba ekuba imvelo evulekile kanye exubile lapho itholakala, ngamunye bazonikeza ulwazi imfundo ngokuvumelana nalokhu okulandelayo okuphokophelwe:
Imfundo Lomuntu Whole: Ezintandaneni abaphiwe kwemazinga ekutiphatsa okusezingeni, ukulinganisela okuhle semicabango, Isizathu kanye nemizwelo, kanye nokuqonda ocebile isiko kanye lwesintu.
Imfundo Wokukhuthaza Okwakhe: Kuphocelela abantu abazokwazi Ukudlula on ukucabanga bendabuko kanye indlela yokusebenza ngombono esibucayi, kuyilapho ngesikhathi esifanayo kokuba ikhono ngalokwakhako ukusetha futhi afeze imigomo emisha.
Imfundo ukugqugquzela ukwazi International: Ezintandaneni abaphiwe ukwazisa izindinganiso abangefani, ukuqonda okujulile yokuqothula eminye imiphakathi kanye omuhle ikhono elihle lokukhulumisana nabanye.
Imfundo Wokukhuthaza Ubuchwepheshe: Ezintandaneni abantu abanolwazi olujulile futhi unamandla okugcwalisa abaholi emikhakheni yabo professional kanye / noma academic.
4. Sakhiwo Sikhungo
Isibophezelo ngokuphathelene naso, sokugcwalisekiswa ngenhla Sikhungo Philosophy, Isimiso futhi Goals lizokwabiwa ngaphakathi isakhiwo eyunivesithi-wide.
Ukuze anqume elingakanani okungenhla Sikhungo Philosophy, Isimiso kanye Goals ziyagcwaliseka, Kobe University ngeke ukuhlola avamile nasendleleni, njalo ukulwela ngcono.
Ngiye bazitshela indima yokuba uMongameli of Kobe University ngo-Ephreli 1, 2015, futhi uyolokhu ebahola kulesi sikhungo phakathi neminyaka emine eyalandela. Umi 1902, Kobe University emikhulu yaseyunivesithi olunzulu nge emasikweni akudala futhi sengisaba nokuphumela wazithoba ukuthatha indima uMengameli at onjalo University bakuqinisekisa.
Njengoba soke siyazi, siye sinqobe nzima 10 iminyaka selokhu amanyuvesi kazwelonke ehanjelwe eyafakwa 2004. Lokhu wave of change nokho kufanele ligcwaliswe. nezindaba eziphuthumayo basuke enqwabelanisa enhlosweni Okwesithathu Mid-Term Plan kanye amanyuvesi kazwelonke isethwe ukuthi kuqale 2016. Kukhona ukubuyekeza eziphawulekayo by the Ministry of Education, Amasiko, Ezemidlalo, Ezemvelo Nezemı Xhungexhunge, Japan (MEXT) e ukuphathwa ngezindleko zayo izibonelelo, isithuthukisi umsebenzi amanyuvesi kazwelonke, futhi yethu waqhubeka imizamo ukuze aphishekele ngokuhwebelana kwembulunga yonke.
bebambisana nabo abaphathi, ubuhlakani kanye nabaqashwa, kubalulekile ngoba Kobe University ukuze sisinde bunzima futhi uqhubeke towards amathemba amasha. Kudingeka futhi nezimo ukulalela futhi wamukele imibono emphakathini, kuhlanganise alumni zethu.
Reform kwezemfundo nocwaningo asikwazi kufezeke ngosuku. Nokho, Mina ngokwami ​​uyoyinikela ekwenzeni lezi iminyaka emine isikhathi soshintsho Kobe University. Ngicela ukubambisana senu somusa.
Faculty of Izinhlamvu
The roots of the university can be traced back to 1902, lapho Kobe Higher Commercial School yasungulwa. Its first president was Tetsuya Mizushima . Ngo 1929 this school was renamed Kobe University of Commerce , and it was further renamed in 1944, Kobe University of Economics
Ngo 1949, under Japan’s new educational systems, the university was merged with Hyogo Normal School, Hyogo Junior Normal School, Kobe Technical College and Himeji High School, all of which were in Hyōgo Prefecture, leading to the creation of Kobe University.
Uyafuna discuss Kobe University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Izithombe: Kobe University Facebook ezisemthethweni